Antonio Conte Oo Fariin Qiiro Leh U Diray Hull City Iyo Xidigooda Dhaawaca Halista Ah Soo Gaaray Ee Ryan Mason | Gabiley Media
January 23, 2017 - Written by media news
HR GMN. Tababare Antonio Conte ayaa fariin qiiro leh u diray ciyaariyahanka khadka dhexe kooxda Hull City Ryan Mason kaas oo laga saaray ciyaarta markii ay isku dhaceen Gary Cahill kulan ay Blues 2-0 ku garaacday Hull City ciyaar ka tirsaneed horyaalka Ingiriiska kana dhacday Stamford Bridge.
Ryan Mason ayaa sideed daqiiqo lagu qarash gareeyay ka hor inta aan isbitaalka loola cararin waxaana daqiiqadii 21-aad lagu badalay David Meyler, taasina waxey qasabtay in qeybta h–e ciyaarta lagu daro 9-daqiiqo.
Diego Costa iyo Gary Cahill ayaa kala dhantaalay Hull City inkastoo aan wali war rasmi ah laga soo saarin Ryan Mason, hadana Conte fariin qiiro leh ayuu u diray ciyaariyahanka iyo kooxdiisa isagoo ka wakiil ah kooxda Chelsea oo dhan.
“Qof walba oo ka tirsan Chelsea wuxuu doonayaa inuu wanaag u rajeeyo [Mason]” ayuu yiri Antonio Conte oo ka hadlayay shirkii jaraaid ee ka dib ciyaarta. “Waxey aheyd qalad xun oo uu la galay Gary. kadib qeybtii labaad uma aysan aheyn wax fiican Gary, balse waxaan go’aansaday inuu sii ciyaaro kulanka”
“Wuxuu ahaa mid xun shilkaan, qof walba oo Chelsea ah ayaa rajeynaya iney arkaan Mason oo soo kabsaday isla markaana garoomada si dhaqso leh ugu soo laabtay”
Dhanka kale tababaraha Hull City Silva ayaa ka hadlay xaaladda uu wiilkiisa ku sugnaa kadib ciyaarta wuxuuna xaqiijiyay in Isbitalka loo qaaday.
“Waxaan qiyaasayaa inuu waqtigaan baaqi kusii ahaan doono Isbitaalka. Waxaan rajeynayaa ineysan noqon mid qaas ah oo qatarteeda leh, balse waan arki doonaa, ma garan karo hadii uu soo jeedo. dhaqtarka wuxuu ii sheegay iney isbtaalka jogaan waana sugi doonaa warkiisa”